The Irrawaddy's Blog: မြန်မာလို ဟဲတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားလုံမေများ
မြန်မာလို ဟဲတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားလုံမေများ
♫ ♪♫ အို ၀ို့ ၀ို ၀ိုး ..... ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ အချစ်က အိမ်မက်လို ဟို ဟိုး ... ♫ ♪♫
အမေရိကန် နဲ့ ဗြိတိန်တို့က ရန်ကုန်မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဖွင့်ပြီး ငွေရှာနေချိန်မှာ မြောက်ကိုရီးယားက စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ငွေရှာပါတယ်။
ရန်ကုန်က ဒီဆိုင်မှာ မြောက်ကိုရီးယားဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စင်တင်ဖျော်ဖြေမှုရှိပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ မြန်မာလို သီဆိုမှုက နှစ်သက်စရာပါပဲ။
အလွမ်းသီချင်းတွေကို နောက်ခံအဆိုတွေနဲ့ အတိုင်အဖောက်ညီညီ မြူးမြူးကြွကြွ သီဆိုကြတာတွေကို ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ တွေ့ရ ကြားရမှာပါ။
ဉာဏ်လင်းအောင် ရဲ့ သူငယ်ချင်း
စတဲ့ စတဲ့ သီချင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အာရှဒေသတွင်း ထင်ရှားပြီးသား တရုတ်သီချင်းများကို မြန်မာမှုပြုထားတာ ဖြစ်လို့ သူတို့အတွက် ဒီသီချင်းတွေက စိမ်းဟန် မတူပါဘူး။
သီချင်း အလိုက်ရပြီးသား ဆိုတော့ မြန်မာအသံထွက်နဲ့ လေ့ကျင့်ရတဲ့အခါ အထောက်အကူ ဖြစ်မှာပါ။
စားသောက်ဆိုင်လာတဲ့ ဧည့်သည်များလည်း စင်ပေါ်တက် ပန်းစည်းပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။
အာရှမှ မြောက်ကိုရီးယား စားသောက်ဆိုင်များ
Posted in: Music , Youtube , Zarny Win , ဂီတ , ဗီဒီယို , သီချင်း
LinnLetSoe said... :
သူတို့ ဟာ သာမန်ညောင်ညတော့ မဟုတ်ပါ။အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးထားတဲ့ သူသျှိုတွေ သတင်းပေးတွေလို့ ယူဆထားရင်
Theodo said... :
မြောက်ကိုးရီးယားဆိုတာ ပိတ်ထားတဲ့ တိုင်းပြည် သူ့ တိုင်းပြည်က ဒီတိုင်း နိုင်ငံခြားထွက် ဖို့ တောင်မလွယ်တာ ခုလို စားသောက်ဆိုင်ဖွင့် တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုဆိုတာ မြောက်အစိုးရ ခွင့်ပြုချက်ရဖို့ ဆိုတာ သာမန်ပြည်သူတွေ ဖို့ ဝေးရော မြောက်ကိုးရီးယား အစိုးရရဲ့ အာရှတခွင် စပိုင်ကွန်ယက်ရဲ့ အခြေစိုက်ရုံးတွေ ပဲ ဖြစ်ရမယ်။
What ever they did but they are better than mm embassy.
nyopyar88888 said... :
ကျောချမှ ဓါးမြမှန်သိရင်တော့ ငါတိုတွေ ညံလို့သာမှတ်လိုက်ကြတော့ ဟေ့
ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ မြန်မာ မှာရှိနေတဲ့ တောင်ကိုရီးယားတွေ ကို စောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့ နောင်တချိန်မှာ တောင်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်တွေလာရင် လုပ်ကြံ ဖို့လို့ ယူဆပါတယ်
jitttoo said... :
mmn said... :
အင်မတန်သတိထားရမှာပါ... သူတို့တွေရဲ့ လှုပ်ရှားပုံတွေကို ကြည့်ရင် လေ့ကျင့်ထားတဲ့ သူတွေဆိုတာ သိသာပါတယ်.. မျက်နှာအမူအယာတွေ အရမ်းသိသာပါတယ်... သာမန်တော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး...
hlaingthuya said... :
သူတို့ လူမျိုးရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ လေးစားအတုယူသင့်တယ် ၊ မြန်မာစကားကို သုံးလအတွင်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင်ယူနိုင်တာ စကားလောက်တင်မဟုတ်ဘူး ၊ မြန်မာသီချင်းပါဆိုနိုင်သွားပြီ၊ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် သူတို့ ရဲ့ သည်းခံကြိုးစား အားထုတ်မှုကို ကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေ ကောင်းကောင်းအတုယူသင့်တယ် ၊ ကျန်တာတွေတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဝေဖန်မနေကြပါနဲ့ ၊ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံကို ထောက်လှမ်းလို့ ရော သူတို့ အတွက် ကြီးမားတဲ့ အကျိုးအမြတ် ဘာရမှာ မို့ လို့ လဲ ၊ ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုးဆိုင် အခြားနိုင်ငံတွေမှာ လဲ ရှိပါတယ် ။ ကိုယ်ချင်းစာတရား ဆိုသည်မှာ မိမိစိတ်နှင့်ကိုယ်ချင်းစာရမည်ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ် ၊ သူတစ်ပါးဧ။် နှလုံးသားအတွင်းသို့ ဝင်ပြီး နှလုံးသားနှင့် ကိုယ်ချင်းစာရန်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ ။ သူ တို့ တွေနဲ့စကားပြောကြည့်ရင် သူတို့ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လို ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်။
Thet Paing said... :
More Burmese North Korean clips on the mspiral YouTube channel: http://www.youtube.com/mspiralmedia
hligthuya ရေ ဦးတစ်ခုလောက်ဝင်ပြောပါရစေ..
အဲဒါတွေကိုအသုံးချပြီး အာရှထိပ်တန်းနိုင်ငံအဖြစ် တင့်
ပြည်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးစီးပွါးရေး လူမှုရေး
ဘာသာရေးမူဝါဒတွေကို မှန်ကန်အောင်ချမှတ်နိုင်မှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာ
လုပ်ကြရင် သူတို့ဟာ ၁၀နှစ်အတွင်းမှာ အရှထိပ်တန်း
မဆလခေတ်ကနေ ဒီနေ့ထိ မြန်မာတွေရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ယှဉ်ပြီးပြောပြတာပါ..
သူလျှိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဆိုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခြံစည်းရိုးကိုယ်လုံအောင်ထိန်းနိုင်ရမယ် . . .
မြန်မာနိုင်ငံကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့လာတဲ့နိုင်ငံတိုင်းက အကျိုးအမြတ်ဆိုတဲ့တစ်ခုကို ရည်မှန်းပြီးလာတာပဲလေ...ငါတောင်မှကြည့်မိရင်း သူတို့ဖွင့်တဲ့ဆိုင်သွားချင်မိတာ ... ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဒေသ၊ ဌာနအမျိုးမျိုးကလူတွေတော့ ရောက်ဖြစ်ကြလောက်ပြီထင်တယ်. . . ငါတို့လည်း နိုင်ငံအပေါ်သစွာ ရှိတဲ့စိတ်အရင်းခံနဲ့ နေရမှာပေါ့လေ...မဟုတ်ရင်တော့ . . အချစ်မှာမျက်စိမရှိ